DVB၊ ကုိုခင်သန်းနဲ့ လက်ရှိအပြောင်းအလဲ။ ~ Htet Aung Kyaw
1:51 PM Htet Aung Kyaw No comments
၁၉၉၉ ၀န်းကျင်က စစ်ထောက်လှမ်းရေးညှိပြီး ပြန်ဝင်သွားသူ (သုို့မဟုတ်) နဂုိုကတည်းက စစ်ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ပြီး ABSDF ကုိုထောက်လှမ်းဖုို့တာဝန်နဲ့ရောက်လာသူလုို့ စွပ်စွဲခံခဲ့ရတဲ့
ကုိုခင်သန်းကို DVB မှာအလုပ်ခန့်ထားတယ်ပြောတော့ လူအတော်များများက မယုံကြပါဘူး...။
ကိုခင်သန်းဆိုတာ ဘယ်သူလဲ။ ဘာကြောင့် DVB မှာပြန်တာဝန်ပေးတာလဲ။
(၂၇-၀၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့က DVB ၀န်ထမ်းတဦး Facebook မှာတင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ)
Aljazeera သတင်းထောက်လွှတ်ပေးရေးတောင်းဆိုတဲ့ DVB ၀န်ထမ်းအုပ်စုထဲ ကိုခင်သန်းပုံကို မြင်ရတော့ အတော်အံ့သြသွားပါတယ်။
အခုတော့ သူက DVB မှာ ၀န်ထမ်းပြန်ဖြစ်နေပြီလား။ ၁၉၉၉ ကနေ ၂၀၁၃ အကြားမှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ။ ဘာကြောင့်ပြန်ဝင်ပြီး ဘာကြောင့်အဖမ်းမခံရသလဲ။ ဘယ်လိုလုပ် ဒီဗွီဘီ ဆီပြန်ရောက်လာသလဲဆိုတာကို ရှင်းမပြတော့ဘူးလား။
ကဲ...ABSDF တာဝန်ရှိသူတွေ၊ DVB တာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုရှင်းပြမလဲ...။ တချိန်က အမှတ် ၂၀၁ တပ်ရင်း မင်းသမီးခစန်းမှာ ကိုခင်သန်းကိုတွေ့ဖူးသူတွေ၊ နောက် ABSDF ဗဟိုက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဘာပြောကြမလဲ...။
(From The Irrawaddy
JUNE, 1999 - VOLUME7NO.5)
ABSDF Research Chief Defects
It has been confirmed that Khin Than, head of the research department of the All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF) surrendered to Burmese military authorities in late March. Rumors that he had been abducted by the SPDC proved to be incorrect, as reliable eyewitnesses reported that they saw Khin Than boardingavehicle with official Burmese license plates on the day of his disappearance from the Thai border town of Mae Sot.
Khin Than was regarded as the best informed member of the ABSDF’s intelligence wing, with extensive knowledge of operations being carried out by the ABSDF and other opposition groups on the Thai-Burma border. His defection raised concerns amongst Burmese dissidents about how the SPDC might use sensitive information to undermine its opponents’ activities.
A staunch supporter of Ne Win’s Burmese Socialist Program Party (BSPP) government prior to the 1988 uprisings, Khin Than later joined the 8-8-88 pro-democracy movement and like many other activists fled to the border area following the military’s crackdown on opponents. He later becameasenior member of the ABSDF and head of the research department.